Kitra – Fifindran-toerana: mety hilalao any Portugal i Arnaud (Ya Ya) | NewsMada
Kitra – Fifindran-toerana: mety hilalao any Portugal i Arnaud (Ya Ya)
Hisokatra ho an-dRandrianantenaina Arnaud (Ya Ya), mpilalao baolina kitra malagasy, indray ny lalana, amin’ny hilalaovana any ivelany. Fantatra izao fa misy klioba any Portugal efa mitily sy mitady azy fatratra.
Araka ny vaovao voaray avy amin’ny tomponandraikitra iray ny baolina kitra malagasy, mety hilalao any Portugal Randrianantenaina Arnaud (Ya Ya). Klioba ao amin’ny D2 any an-toerana ny mitady azy, ankehitriny. Efa eo am-piresahana ny amin’ny taratasy sy ny pitsopitsony rehetra ahafahany mandeha mifindra toerana any amin’ity firenen’i Cristiano Ronaldo (CR7) ity, amin’izao fotoana izao, ny roa tonta.
Raha ny fantatra, tsy ho ela intsony fa raha mizotra ara-dalàna ny zava-drehetra, hanainga aorian’ny fialan-tsasatry ny Paska i Arnaud. Tsy mbola nanambara ny anaran’ilay ekipa ny loharanom-baovao fa amin’ny fotoana ahavitan’ny fifanarahana vao holazaina amin’ny fomba ofisialy izany sy ny daty hiaingan’i Arnaud (Ya Ya).
Tsiahivina fa efa nisy ny fotoana saika hilalaovan’i Arnaud, tany amin’ny ekipan’ny FC Grenoble Frantsa, ny fiandohan’ny taona 2020, saingy tsy raikitra izany noho ny resaka antontan-taratasy. Efa niatrika fitsapana tany an-toerana anefa ny tovolahy tamin’izay. Marihina fa klioba ilalaovan’i Jerome Mombris ity saika nilalaovany any Frantsa ity. Taorian’izay, niverina eto an-tanindrazana i Arnaud ary namonjy ny klioba nisy azy: ny Cnaps Sport. Noho ny fisian’ny Coronavirus anefa, tsy hita ary tsy heno intsony izy. Amin’izao fotoana izao, fantatra fa manatevin-daharana ny Elgeco Plus i Arnaud, mandra-piandry ny fotoana handehanany any Portugal.
Lohalaharana matanjaka sy mahay mamono baolina ny tovolahy izay vao 20 taona monja. Efa nandrafitra ny Barea de Madagascar A sy B izy, ary efa voafidy ho mpilalao mendrika nandritra ny “Cosafa U20”, notanterahina tany Zambia, ny taona 2019.